"စစ်မှန်သောယေရှုဘုရား၏အသင်းတော်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"စစ်မှန်သောယေရှုဘုရား၏အသင်းတော်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
၁၉:၅၈၊ ၂ မတ် ၂၀၀၉ ရက်နေ့က မူ
၁၈၃၆၀ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ နှစ်
removed bible references
၀၈:၄၈၊ ၂ မတ် ၂၀၀၉ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
Jose77 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
အရေးမကြီး (→‎အဓိကဟောကြားချက် ၅ ခု: changed from "5" to "10" main doctrines)
၁၉:၅၈၊ ၂ မတ် ၂၀၀၉ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
အရေးမကြီး (removed bible references)
[[Image:T J C.jpg|thumb|စစ်မှန်သောယရှုဘုရား၏အသင်းအစုအဝေးတိုက်၊ ထိုင်ချန်း၊ ထိုင်ဝမ်]]
'''စစ်မှန်သောယရှုဘုရား၏အသင်းတော်''' (True Jesus Church)သည် သီးခြားရပ်တည်ေသာ ခရစ်ယာန်ေကျာင်းေတာ်ဖြစ်ြပီး ([[တရုတ်]])နိုင်ငံ [[ပီကင်္း]]မြို့တွင် ၁၉၁၇ ခုနှစ်၌ စတင်တည်ေထာင်သည္။ ယခုလက်ရှိတွင် နိုင်ငံေပါင်း ၄၅ နိုင်ငံ၌ အသင်းသား ၁.၅ သန်းခန့် ရှိသည်။ ဤ​ေကျာင်းေတာ်သည် ၂၀ ရာစု အစောပိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာသော ခရစ်ယာန်ဘာသာ ပန်တီကိုစတယ်ေကျာင်းခွဲ (Pentecostal branch of Christianity) အောက်တွင် ရှိသည်။
"နုတ်​ဖြင့်​ရွတ်​ဖတ်​သ​ရဇ္ဈယ်​ခြင်း​ဖြင့်​​ သက်​သေ​ခံ​သော​​ သန့်​ရှင်း​သော​ဝိ​ညာဥ်​တော်​အား​​ ခမ်း​ခမ်း​နား​နား​​ ကြို​ဆို​ခြင်း​သည်​​ ကောင်း​ကင်​ဘုံ​နိုင်​ငံ​တော်​ရှိ​​ ကျွ​နု်ပ်​တို့​ပိုင်​​ အ​မွေ​အ​နှစ်​များ​အား​​ စောင့်​ရှောက်​တော်​မူ​ခြင်း​၏​​ က​တိ​ဝန်​ခံ​ချက်​ပင်​​ ဖြစ်​သည်​။​"
"Receiving the Holy Spirit, evidenced by speaking in tongues, is the guarantee of our inheritance of the Kingdom of Heaven".
သင်တို့သည်လည်း ကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသော သမ္မာတရားကိုကြားနာ၍ ထိုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပြီးမှ၊ ဂတိတော်နှင့်ယှဉ်သော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံကြရပြီ။ ပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့သည် ဘုန်းတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနှင့် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းသို့ မရောက်မှီကာလပတ်လုံး ထိုဝိညာဉ်တော်သည် ငါတို့ အမွေ၏ စားရန်ဖြစ်တော်မူ၏။
ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်ဟု ဝိညာဉ်တော်သည် ငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူ သက်သေ ခံတော်မူ၏။ သင်တို့သည် ဇာတိ ပကတိအတိုင်း အသက်ရှင်လျှင် သေရကြမည်။ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကိုယ်ကာယ၏ အကျင့်တို့ကို သေစေလျှင် အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော် ဆုံးမပဲ့ပြင်တော် မူသမျှသော သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် တဖန်ကြောက် ရွံ့တတ်သော ကျွန်၏သဘောကို ရကြသည်မဟုတ်။ အဗ္ဗအဘဟုခေါ်ရသော အခွင့်နှင့် သားဖြစ်ခြင်း၏ သဘောကိုရကြပြီ။ သားမှန်လျှင်အမွေခံ၊ ဘုရားသခင်၏ အမွေခံဖြစ်ကြ၏။ ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဘုန်းဝင်စားမည် အကြောင်း၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်ဆက်ဆံသော အမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏။
([[ဧဖက်ဩဝာဒစါ။၁]] 1:13-14; [[ရောမဩဝာဒစါ။၈]] 8:16)
"နှစ်​ခြင်း​မင်္ဂ​လာ​ကျင်း​ပ​ခြင်း​သည်​​ ဘု​ရား​သ​ခင်​က​​ အ​ပြစ်​များ​ကို​​ ခွင့်​လွှတ်​စေ​ခြင်း​နှင့်​​ အ​သစ်​တစ်​ဖန်​​ ပြန်​လည်​မွေး​ဖွား​ခြင်း​တို့​ကို​​ ဖြစ်​စေ​သည့်​ ခ​ရစ်​ယာန်​ဓမ္မ​မင်္ဂ​လာ​ ဖြစ်​သည်​။​​ မြစ်​​၊ ပင်​လယ်​​၊​ ရေ​ထွက်​စမ်း​ချောင်း​​ စ​သည်​တို့​ကဲ့​သို့​​ စီး​ဆင်း​နေ​သော​​ ရေ​ပြင်​တွင်​​ နှစ်​ခြင်း​မင်္ဂ​လာ​ပြု​ခြင်း​ကို​​ ကျင်း​ပ​လေ့​ရှိ​သည်​။​​ နှစ်​ခြင်း​မင်္ဂ​လာ​ပြု​ခြင်း​ကို​ခံ​ယူ​ပြီး​​ သ​ခင်​ယေ​ရှု​ခ​ရစ်​၏​​ အ​မည်​နာ​မ​တော်​အား​ဖြင့်​​ ခ​ရစ်​ယာန်​ဘာ​သာ​ဝင်​အ​ဖြစ်​​ ရောက်​ရှိ​​ ခံ​ယူ​ကျင့်​သုံး​လာ​သည်​။​။​​ နှစ်​ခြင်း​ခ​ရစ်​ယာန်​ဘာ​သာ​အား​​ ကြို​ဆို​လက်​ခံ​သူ​သည်​​ သူ့​မျက်​နှာကို​​ အောက်​ဘက်​သို့​မူ​စေ​ပြီး​​ သူ့​ဦး​ခေါင်း​တစ်​ခု​လုံး​ကို​​ ရေ​အောက်​သို့​​ စုန်း​စုန်း​မြုပ်​အောင်​​ နှစ်​ထား​ရ​မည်​။​"
"Water baptism is the sacrament for the remission of sins and for regeneration. The baptism takes place in natural living water, such as the river, sea, or spring. The Baptist, whom already has already received baptism of water and the Holy Spirit, conducts the baptism in the name of the Lord Jesus Christ. And the person receiving the baptism should be completely immersed in water with head bowed and face downward".
ပေတရုကလည်း၊ သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းင‍ှာ နောင်တရ၍တယောက်မျှမကြွင်း၊ ယေရှုခရစ်၏ နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော့။ သို့ပြုလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကို ခံရကြ လိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဂတိတော်သည် သင်တို့နှင့်၎င်း၊ သင်တို့၏သားသမီးတို့နှင့်၎င်း၊ ဝေးသော သူတို့တွင် ငါတို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ခေါ်တော်မူသမျှသောသူတို့နှင့်၎င်း ဆိုင်သည်ဟု ဟော၏။
ယေရှုကလည်း၊ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် မမွေးသောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ မဝင်ရဟု ငါအမှန်အကန်ဆို၏။ ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည် ဇာတိပကတိဖြစ်၏ ဝိညာဉ်တော်မွေးသောအရာသည် ဝိဉာဉ် ဖြစ်၏။
([[ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။၃]] 3:5; [[ရှင်မသ္သဲခရစ်ဝင်။၂၅]]3:16; [[တမန်တော်ဝထ္ထု။၂]] 2:38, 10:48).
"The sacrament of feet washing enables one to haveapart with the Lord Jesus. It also serves asaconstant reminder that one should have love, holiness, humility, forgiveness and service. Every person who has received water baptism must have their feet washed in the name of Jesus Christ. Mutual feet washing may be practiced whenever is appropriate".
ထိုနေါက်မှ ရေကိုအင်တုံ၌လောင်း၍ တပည့်တော်တို့၏ခြေကို ဆေးပြီးမှခား၌စည်းထားသောပုဝာနှင့် သုတ်တော်မူ၏။ ယေရှုကလည်း၊ ရေချိုးပြီးသောသူမည်သည်ကား၊ ခြေဆေးခြင်းမှတပါး ဆေးရသောအကြောင်းမရှိ၊ တကိုယ်လုံးစင်ကြယ်၏။ သင်တို့သည် စင်ကြယ်သော်လည်း အချို့မစင်ကြယ်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ သင်တို့သည် ငါ့ကိုအရှင်ဘုရားဟူ၍၎င်း၊ သခင်ဟူ၍၎င်း ခေါ်တတ်ကြ၏။ ထိုစကားသည်လည်း ဟုတ် မှန်သောစကားဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့ကိုခေါ်ကြသည့်အတိုင်း ငါမှန်၏။ ငါသည် သခင်ဖြစ်လျက်၊ အရှင်ဘုရားလည်းဖြစ်လျက်နှင့် သင်တို့၏ခြေကိုဆေးလျှင် သင်တို့သည် အချင်းချင်းတို့၏ခြေကို ဆေးရကြမည်။ ငါသည် သင်တို့၌ပြုသကဲ့သို့ သင်တို့သည်ပြုစုစေခြင်းငှာ ပုံသက်သေကို ပြခဲ့ပြီ။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ကျွန်သည် သခင်ထက်သာ၍ ကြီးမြတ်သည်မဟုတ် တမန်သည်လည်း စေလွှတ်သောသူထက်သာ၍ ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်။ ဤအရာများကို သင်တို့သိ၍ သိသည်အတိုင်းကျင့်လျှင် မင်္ဂလါရှိကြ၏။
"''The Holy Communion is the sacrament to commemorate the death of the Lord Jesus Christ. It enables us to partake of the flesh and blood of our Lord and to be in communion with Him so that we can have eternal life and be raised on the Last Day. This sacrament should be held as often as possible. Only one unleavened bread and grape juice is used."''
ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ လူ၏အသားကိုမစား၊ အသွေးကိုမသောက်လျှင် သင် တို့၌ အသက်မရှိ။ ငါ၏အသားကိုစား၍ ငါ၏အသွေးကိုလည်း သောက်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ ထိုသူကို နေါက်ဆုံးသောနေ့၌ ငါထမြောက်စေမည်။ ငါ၏အသားသည် စားစရာကောင်း၏။ ငါ၏ အသွေးလည်းသောက်စရာကောင်း၏။ ငါ၏အသားအသွေးကို သောက်စားသောသူသည် ငါ၌တည်၏။ ထိုသူ၌လည်း ငါတည်၏။ အသက်ရှင်တော်မူသော ခမည်းတော်သည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၍၊ ငါသည်ခမည်းတော်အားဖြင့် အသက်ရှင်သည်နည်းတူ၊ ငါ့ကိုစားသောသူသည် ငါ့အားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ဝိညာဉ်သာလျှင်အသက်ရှင်စေ၏။ ကိုယ်ကာယသည်အလျှင်မတတ်နိုင်။ ငါပြောသောစကားသည် ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။
ထိုနည်းတူ၊ ညစာစာပြီးမှ ခွက်ကိုလည်း ယူ၍၊ ဤခွက်ကား ငါ့၏အသွေး၌ တည်သောပဋိညာဉ်တရား သစ်ဖြစ်၏။ ဤခွက်ကို သောက်သောအခါခါ၊ ငါ့ကို အောက်မေ့ဘို့ရာ သောက်ကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် ထိုမုန့်ကိုစား၍ ထိုခွက်ကို သောက်သောအခါခါ၊ သခင်ဘုရားအသေခံ တော်မူခြင်းကို ကြွလာတော် မမူမှီတိုင်အောင် ပြကြ၏။ ထိုကြောင့် သခင်ဘုရား၏ မုန့်နှင့်ခွက်ကို မထိုက်မတန်ဘဲ စားသောက်သောသူမည်သည်ကား၊ သခင်ဘုရား၏ ကိုယ်တော်နှင့် အသွေးတော်ကို ပြစ်မှားရာရောက်၏။ သို့ဖြစ်၍ လူတိုင်းကိုယ်ကိုကိုယ်စစ်ကြောပြီးမှ မုန့်ကိုစားစေ။ ထိုနည်းတူ ခွက်ကိုလည်း သောက်စေ။
([[ကောရိနသုဩဝာဒစါပဌမစောင်။၁၁]] 10:17, 11:26; [[ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။၆]] 6:53; [[ရှင်မာကုခရစ်ဝင်။ ၁]] 14:24-25).
"The Sabbath day, the seventh day of the week (Saturday), isaHoly Day, blessed and sanctified by God. It is to be observed under the Lord's grace for the commemoration of God's creation and salvation and with the hope of eternal rest in the life to come".
ခြောက်ရက်ပတ်လုံး အလုပ်မျိုးကို ကြိုးစား၍ လုပ်ဆောင်လော့။ သတ္တမနေ့ရက်သည် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ ဥပုသ်နေ့ဖြစ်၏။ ထိုနေ့၌ သင်မှစ၍ သင်၏သားသမီး၊ ကျွန်ယောက်ျား မိန်းမ၊ တိရစ္ဆာန်၊ သင်၏ တံခါးအတွင်း၌နေသော ဧည့်သည်အာဂန္တုသည် အလုပ်မလုပ်ရ။
ထိုကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏လူတို့အဘို့အလိုငှာ ငြိမ်ဝပ်ခြင်း ချမ်းသာတမျိုးသည် ကျန်ရစ်သေး၏။ ဘုရားသခင်သည် မိမိအမှုအရာတို့ကို ပြီးစီး၍ ငြိမ်ဝပ်စွာ နေတော်မူသည် နည်းတူ၊ ထိုချမ်းသာထဲသို့ ဝင်ရသောသူသည်လည်း မိမိအမှုအရာတို့ကို ပြီးစီး၍ ငြိမ်ဝပ်စွာနေရ၏။ ထို့ကြောင့်၊ ဣသရေလလူတို့သည် မယုံကြည်သော စိတ်ရှိသဖြင့် လဲသကဲ့သို့ ငါတို့သည်မလဲ၊ ထိုချမ်းသာထဲသို့ ဝင်ရမည် အကြောင်းကြိုးစား အားထုတ်ကြကုန်အံ့။
([[ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁]] 2:2-3; [[ဟေဗြဲဩဝာဒစါ။၄]] 4:9-11)
"Jesus Christ, the Word who became flesh, died on the cross for the redemption of sinners, resurrected on the third day and ascended to heaven. He is the only Saviour of mankind, the Creator of the heavens and earth, and the only True God".
ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရ အသက်ကို ရစေခြင်းင‍ှာ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားကို ချစ်တော်မူ၏။
ငါသည် ကိုယ်တိုင်ခံယူသည်အတိုင်း၊ သင်တို့အား ရှေ့ဦးစွာ အပ်ပေးသောအကြောင်းအရာဟူမူကား၊ ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏။ သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှ၊ ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်တော်မူ၏။ ထိုသခင်၏ နာမတော်မှတပား ငာတို့ကို ကယ်တင်နိုင်သော နာမတစုံတခုမျှ ကောင်းကင်အောက် လူတို့တွင် မပေါ်မရှိဟု ပေတရုသည် ထိုသူတို့အား မြွက်ဆို၏။
::([[ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။၃]] 3:16; [[ကောရိနသုဩဝာဒစါပဌမစောင်။၁၅]] 15:3-4; [[တော်ဝထ္ထု။၄]] 4:12).
"The Holy Bible, consisting of the Old and New Testaments, is inspired by God, the only scriptural truth, and the standard for Christian living".
ဘုရားသခင်၏ လူသည်စုံလင်သောသူ၊ ကောင်းသော အမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို ပြုစုခြင်းအလိုင‍ှာ ပြင်ဆင်သောသူ ဖြစ်မည်အကြောင်း၊ ဩဝာဒပေးခြင်း၊ အပြစ်ကိုဘော်ပြခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာ ပြုပြင်ခြင်း၊ တရားကို သွန်သင်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာ ပြုပြင်ခြင်း၊ တရားကိုသွန်သင်ခြင်း ကျေးဇူးများကို ပြုတတ်၏။
"Salvation is given by the grace of God through faith. Believers must rely on the Holy Spirit to pursue holiness, to honour God, and to love humanity".
ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလိုအလျောက် ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင် သနားတော်မူရာဖြစ်သတည်း။ ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှ ဝာကြွားစရာ
"''The church, established by the Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit during the time of the 'latter rain', is the restored true church of the apostolic time."''
အိုဇိအုန်မြို့သားတို့၊ ဝမ်းမြောက်၍ သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို အမှီပြုလျက် ရွှင်လန်း ကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ ဓမ္မဆရာကို ပေးတော်မူ၍ အစအဦး၌လည်း အရင်မိုဃ်းနှင့်နောက်မိုဃ်းကို သင်တို့ အပေါ်မှာ ရွာစေတော်မူမည်။ ကျန်ကြွင်းရစ်သော ဧဒုံအမျိုးသားမှစ၍ ငါ၏နာမဖြင့် သမုတ်သောတပါးအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို သိမ်းယူစေခြင်းင‍ှာ၊
::([[ယောလအနာဂတ္တိကျမ်း။၂]] 2:23; [[အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း။၉]] 9:11).
"''The Second Coming of Jesus will take place on the Last Day when He descends from heaven to judge the world: the righteous will receive eternal life, while the wicked will be eternally condemned."''
လူသားသည် မိမိဘုန်းအာနုဘော်ကို ဆောင်လျက်၊ သန့်ရှင်းသော ကောင်းကင်တမန်များ အခြံအရံ တို့နှင့်တကွ ကြွလာတော်မူသောအခါ ဘုန်းရှိသော ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်၍၊ ရှေ့တော်၌ လူမျိုးအပေါင်းတို့ကို စုဝေးစေသဖြင့်၊ သိုးထိန်းသည် သိုးနှင့်ဆိတ်တို့ကို အသီးအခြားခွဲ၍၊
သခင်ဘုရားသည် ကြွေးကြော်ခြင်း၊ ကောင်းကင်တမန်မင်း အသံပေးခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ တံပိုးတော် ကို မှုတ်ခြင်းနှင့်တကွ၊ ကောင်းကင်ဘုံမှ ကိုင်တိုင် ဆင်းသက်တော်မူ၍၊ ခရစ်တော်၌ သေလွန်သောသူတို့သည် အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါ အသက်ရှင်၍ ကျန်ကြွင်းသော ငါတို့သည် အာကာသကောင်းကင်၌ သခင်ဘုရားထံတော်သို့ ရောက်စေခြင်းင‍ှာ၊ ထိုသူတို့နှင့်တကွ မိုဃ်းတိမ်ပေါ်သို့ ချီဆောင်ခြင်းကို ခံရသောအားဖြင့် သခင်ဘုရားနှင့် အတူ အစဉ်မပြတ် နေရကြလိမ့်မည်။
::([[ရှင်မသ္သဲခရစ်ဝင်။၂၅]] 25:31-34; [[သက်သာလောနိတ်ဩဝာဒစါပဋ္ဌမစောင်၄]] 4:16-17).
[[ak:Ỳesu Asafo Ankasaankasa]]
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/21212" မှ ရယူရန်